トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Ongorora mamiriro-muitiro nepachinko yaiitirwa [chipikiri kuchinja uye nezvipikiri Zvak ed.]
Kana kazhinji akaenda kutamba ari nepachinko yokumusoro, ndinofunga kuti tichaona wokutanga chinangwa aiva muenzaniso mumwe chete. Saka, ndiwo chipikiri kugadziridzwa kuti ndinoda kuziva. Chipikiri kuchinja, kana pane anoda kutumbura zvitoro, izvozvo chavawo zvinhu kuti sarudzo kana kwete. Kunze zvazvingava, akadai CR, nekuti Hanemono kwakadaro dzimwe nguva chipikiri kugadziridzwa iri broadly akakamurwa zvaitika, vanhu havazokwanisi kupfuura kudzivisa cheki kuti chipikiri kugadziridzwa kuti kunyanya mutambo kuna Hanemono centre.
chipikiri kugadziridzwa, maneja kana mukuru, kuti vaite chimwe munhu, zvakadai sechibvumirano chipikiri Artist kunowanikwa. The vanhu, kunyange zvazvo kazhinji upenyu pane tsika. Chokwadi kuti imwe munhu iri kuitwa nepachinko yokumusoro ndechokuti tsika kuchinja nokuda chitoro nomumwe ndicho chokwadi. Kana Minukere tsika chipikiri kugadziridzwa, kuhwina kubva muzana uchauya pane tinongoita kwomwoyo.
Naizvozvo, isu achasuma munhu kuona nenzira chipikiri kuchinja.
kuona kuburikidza mbambo kuchinja, kuburikidza nepachinko yokumusoro pamusoro mavhiki maviri kubva imwe vhiki zvishoma, unofanira kuchengeta. Achitaura sei, nekuti ezvipikiri kugadziridzwa chinoitwa kuti musiyano mumwe millimeters shoma, uye kwete Ika zvakasimba kuonekwa mbambo pfungwa, ukapotsa. Beginners, uye kwete zvakakwana kuziva kuti kutanga akazarukira akacherekedza zvakajeka, inoti zvakaoma kuziva whether're zvikuru rakashama. Kana rakazaruka izvo kunhivi nzara
chitsuwa, ndizvo mirawo saka vakaita mumwe chitoro, hazvina Zvisinei kutaura pano, kana kutarisa ezvipikiri kubva kumusoro, edza kutsvaka chipikiri mhando iyi Please. In
, ndicho chipikiri kuchinja yakanakisisa kutanga nyore kunzwisisa.
ezvipikiri kuchinja kuti tightening kunzwa vari nepachinko parlors, mumwe mbambo, zvishoma pane kurutivi kutanga chucker, ndiyo nyaya ezvipikiri ari kuuya ayo ari kunze. Kana ichi chipikiri kugadziridzwa, inzvimbo inonzi katanhatu kubva rotational kumhanya 1 miniti vanenge 5 nguva. Kuchinja, ndapota funga zvinoitika chipikiri kuchinja mukuru kutendeuka reshiyo nepachinko parlors.
Kana zvimwe tightening, kutanga Chat Pamwe mativi ose motokari, muchaona bindepinde zvose chipikiri. Kana ichi chipikiri kugadziridzwa, inzvimbo inonzi kashanu kubva rotational kumhanya 1 miniti vanenge 4,6 nguva. In kwacho zuva, kana uchida chinhu zvachose zvakakomba purofiti, ngwarira nokuti chipikiri kugadziridzwa kuti rinowanika mune dzimwe nzvimbo. Kana zvakadaro yakarova tightening zvipikiri, zvichava nokukurumidza akapedza Nante zviuru Yen. In
, tarisai chipikiri kubva kumusoro kusvikira zvinopesana, mbambo kana mumwe zvipikiri, dzinonzwa kusvikira kunze kupfuura kutanga chucker kunyange zvishoma wakanaka chipikiri. Kana ukatarira kumusoro, kusiyana pachena unogona kuona. Kuti kazhinji kunoonekwa chipikiri kugadziridzwa zviitiko zvakadaro. Panyaya iyi, iyo rotational kumhanya 1 miniti achava kubva munenge 6 nguva ka7. On kana divi
zvipikiri, kana akazaruka kuonekwa, pachava vanhu tsika chipikiri kuchinja. Muna nepachinko chitoro kushanya wose, vaviri kana kuvhura mbambo, ndapota edza kuona.
Mukuwedzera, zvishoma apfuura pasi hwindimiri, pane nzvimbo pane mukaha pakati ezvipikiri uye chipikiri.
mativi ose mbambo gwanza, vanoroverera marapirwo iri, asati kuenda kutanga tava kugadziridzwa, akadai bhora inowira imomo. Chipikiri kuchinja, nekuti zviri kuvaka yose puranga, kwete kutanga, divi chipikiri Nesuwo vanokurudzira kuti kuedza kusimbisa.
Kunyange kana hamuna kutarira zvipikiri saka kure, vanoroverera dzinokosha kuti aiona kubva pamusoro, ndinofunga kana pfungwa akarasikirwa neimwe kubenzi vanonakidzwa anozvigona. Inzvimbo iyo 5 nguva kubvira 6 nguva. In kwacho zuva, kana uchida chinhu zvachose zvakakomba purofiti, ngwarira nokuti chipikiri kugadziridzwa kuti rinowanika mune dzimwe nzvimbo. Kana zvakadaro yakarova tightening zvipikiri, zvichava nokukurumidza akapedza Nante zviuru Yen. In
Kunyange kana hamuna kutarira zvipikiri saka kure, vanoroverera dzinokosha kuti aiona kubva pamusoro, ndinofunga kana pfungwa akarasikirwa neimwe kubenzi vanonakidzwa anozvigona. Zvinokurudzirwa kuti unoedza.
Kunyange kana hamuna kutarira zvipikiri saka kure, vanoroverera dzinokosha kuti aiona kubva pamusoro, ndinofunga kana pfungwa akarasikirwa neimwe kubenzi vanonakidzwa anozvigona.